Nhau - Ultra Yakakwira Yakachena Silicon Carbide Musika Kukura & Maitiro
Ultra High Yakachena Silicon Carbide Musika Kukura & Maitiro
New York, Zvita 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) - Reportlinker.com inozivisa kuburitswa kweshumo "Ultra Yakakwira Yakachena Silicon Carbide Musika Saizi, Kugovana & Maitiro Ekuongorora Chirevo NeKunyorera, Nedunhu Uye Chikamu Chikamu, 2020 - 2027 ″
Iyo yepasi rose Ultra yakachena kuchena kwesilicon carbide musika saizi inotarisirwa kusvika paUS $ 79.0 mamirioni na2027. Inotarisirwa kuwedzera kuCAGR ye14.8% kubva 2020 kusvika 2027. Kukwira kuri kupinda kwemotokari dzemagetsi uye kukura kwesimba rinowedzerwazve chikamu inofungidzirwa kupa mikana yekukura kune vanotengesa vatengesi
Magetsi emagetsi uye photovoltaic inverters ari pakati pekukosha kwenzvimbo dzekushandisa dzesilic carbide (SiC) semiconductors, uyezve, SiC magetsi emagetsi anogamuchirwa mumagetsi emagetsi ekuchaja zvigadzirwa, mhepo simba zvivakwa, uye maindasitiri mota anotyaira.
Nekudaro, kudiwa kwemotokari dzemagetsi kunotarisirwa kusimudzira kukura kweiyo yakakwira-yakakwira kuchena kwesilicon carbide semiconductors. Iko kukura kuri kushandiswa kwesimba rinowedzerwazve kwesimba rekugadzira magetsi kutenderera pasirese kunotarisirwa kutyaira musika weSiC magetsi semiconductors.
Iko kuvandudzwa kweanobuda matekinoroji, senge quantum komputa, yekunyepedzera njere, uye 5G tekinoroji, inotarisirwawo kupa mikana mitsva yevatengesi vemusika. Kuwedzera kupinda mukati meaya matekinoroji, kunyanya muUS, kunogona kuramba kuri chinhu chakakonzera kukura kwemusika. Makambani muUS akaisa mari zhinji muaya matekinoroji, zvichidaro zvichikanganisa kuvandudzwa kwemasimiconductors anodikanwa ekuchenjera kwekugadzira, supercomputer, uye nzvimbo dzematare. Semuenzaniso, maR & D ekudyara muUS semiconductor indasitiri yakawedzera paCAGR ye6.6% kubva 1999 kusvika 2019. MuUS, R&D investments ye2019 yakasvika madhora 39.8 bhiriyoni, ayo aive akakomberedza 17% yekutengesa kwayo, yakakwira kwazvo pakati pese nyika.
Kuwedzera kudiwa kwemwenje-kuburitsa diode (ma LED) ndechimwe chinhu chakakosha chinofungidzirwa kuita kuti kukura kwemusika kuitike mukati memakore anouya. Ultra-yakakwira yakachena silicon carbide inoshandiswa kubvisa iyo yakasviba mumaLED.
Misika yemwenje ye LED inotarisirwa kunyoresa kukura kwe13,4% kubva 2020 kusvika 2027 nekuda kwekudzikira kwemitengo, mitemo yakaoma ine chekuita nemagetsi ekuvhenekesa, uye kuyedza kwakatorwa nehurumende dzakasiyana siyana munzira yekuvandudza budiriro.
Makambani muSouth Korea anobatanidzwa mukugadzirwa kwesilicon carbide tekinoroji, iyo inofungidzirwa kuti icharamba iri yakakosha kutyaira chinhu mukufamba kwenguva. Semuenzaniso, POSCO, mumwe wevanotungamira vagadziri vesimbi mupasi, akaisa mari makore gumi mukuvandudza kwe SiC imwechete-kristaro.
Mune chirongwa ichi, POSCO iri kushanda mukusimudzira kwe150-mm uye 100-mm SiC substrate tekinoroji, iri padyo nekutengesa. Mumwe mugadziri SK Corporation (SKC) anogona kushambadzira 150-mm SiC zvitete.
Ultra Yakakwira Yakachena Silicon Carbide Musika Wepamusoro Zvakakosha
Nezvose zviri zviviri mari uye vhoriyamu, semiconductor yaive chikamu chakakura kwazvo chekushandisa muna 2019. Kukura kwechikamu kunofungidzirwa nekukwira kwezvinodiwa zvevari kuwedzera vepakati-boka revanhu, uye nekudaro zvisina kunangana kudiwa kwemagetsi
Nekushandisa, maLED anofungidzirwa kuti achawedzera paCAGR inokurumidza kwazvo ye15,6% maererano nemari kubva muna2020 kusvika 2027. Kuwedzera kuziva pamusoro pekudziya kwepasirese kwakagadzira mhedzisiro pane kudiwa kwemaLED nekuda kwesimba ravo
• COVID-19 denda rakagadzira zvakakomba kumagumo ekushandisa maindasitiri e Ultra-yakachena kuchena silicon carbide (UHPSiC). Nezve vhoriyamu, kudiwa kweHPSiC kunofungidzirwa kudzikira neinenge 10% muna 2020 kubva 2019
Asia Pacific ndiyo yaive musika wedunhu wakakura uye yaigovaniswa chikamu che48.0% muna 2019. Kugadzirwa kwakanyanya kwemagetsi nemagetsi muChina, South Korea, neTaiwan chinhu chakakosha mukukura kwemusika wedunhu.
Post nguva: Jan-06-2013